नेपाली रेल चड्ने कति लाग्छ भाडा ? | Janaki Post
Home प्रदेश २ नेपाली रेल चड्ने कति लाग्छ भाडा ?
नेपाली रेल चड्ने कति लाग्छ भाडा ?
Nepal Train : Janaki Post
२८ माघ, काठमाडौं । कुर्था–जयनगर रेलमार्गमा झण्डै सडक मार्गमा सरकारले तोके जतिकै भाडादर कायम गरिने भएको छ । सो रेलमार्गमा रेल सञ्चालनको तयारी अघि बढाइरहँदा नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले भाडादर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ ।
धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म ३५ किलोमिटर रेलमार्गमा भाडादर रु ७५ प्रस्ताव गरिएको कम्पनीका महापबन्धक गुरु भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । अरु सवारीसाधन जति नै हुने गरी भाडादर प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । सामान्य भन्दा डिलक्स सिटका लागि भने महँगो भाडा पर्नेछ । सामान्य भन्दा चारदेखि पाँच गुणासम्म महँगो भाडा कायम हुनसक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीले प्रस्ताव गर्दा रु ३७५ प्रस्ताव गरेका छौँ ।’ औपचारिक रुपमा उद्घाटन गर्नासाथ रेल नियमित सञ्चालनको तयारी पूरा भएको कम्पनीले जनाएको छ । भारतीय कम्पनी कोनकोन कम्पनीबाट केही समयमा नै संरचना जिम्मा लिइने कम्पनीले जनाएको छ ।
Previous articleप्रचण्डले भने : केपीजी, देख्नुभयो विरोध प्रदर्शन कस्तो हुन्छ ?
Next articleबजारमा नयाँ टिसर्ट- नाटकै हो, ९ टंकी नै हो